Eritrereto hoe Olona Tokony Hanao Ahoana Ianao | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Umbundu Uruund Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin’ny fitondran-tena masina sy ny fanehoana fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra.” —2 PET. 3:11.
Inona no tokony hataontsika, raha te hahazo sitraka amin’Andriamanitra isika?
Inona no azonao atao mba hiarovana ny fifandraisanao amin’i Jehovah?
1, 2. Inona no tokony hataontsika, raha te hahazo sitraka amin’Andriamanitra isika?
ARA-DALÀNA raha zava-dehibe amintsika izay eritreretin’ny hafa momba antsika. Kristianina anefa isika, ka tsy tokony ho zava-dehibe kokoa ve izay eritreretin’i Jehovah momba antsika? Izy tokoa mantsy no Avo Indrindra eo amin’izao rehetra izao, ary izy no “loharanon’aina.”—Sal. 36:9.
2 Nasongadin’ny apostoly Petera fa tokony hanana “fitondran-tena masina” sy ‘hahafoy tena ho an’Andriamanitra’ isika, raha te hahazo sitraka amin’i Jehovah. (Vakio ny 2 Petera 3:11.) Tokony ho masina na madio àry ny ‘fitondran-tenantsika.’ Tafiditra amin’izany ny zavatra ataontsika sy eritreretintsika ary ny fivavahantsika. Mila ‘mahafoy tena ho an’Andriamanitra’ koa isika, ka ny fitiavana lalina sy ny fanajana azy no tokony handrisika antsika hanao izany. Tsy ny ataontsika ihany àry no zava-dehibe fa ny ao am-pontsika koa, raha te hahazo sitraka aminy isika. “Mpandinika ny fo” i Jehovah, ka fantany raha masina ny fitondran-tenantsika, ary raha izy irery ihany no tena iraiketan’ny fontsika.—1 Tan. 29:17.
3. Inona avy no fanontaniana tokony hoeritreretintsika?
3 Tsy tian’i Satana Devoly hahazo sitraka amin’Andriamanitra isika. Manao izay rehetra azony atao izy mba hahatonga antsika tsy ho naman’i Jehovah intsony. Tsy misalasala mandainga sy mamitaka izy, mba hitaomana antsika hiala amin’Andriamanitra. (Jaona 8:44; 2 Kor. 11:13-15) Tsara àry raha manontany tena isika hoe: ‘Ahoana no amitahan’i Satana ny olona? Inona no azoko atao mba hiarovana ny fifandraisako amin’i Jehovah?’
4. Inona no kendren’i Satana mba hanimbana ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra, ary nahoana?
4 Hoy i Jakoba mpianatr’i Jesosy: ‘Tsapaina ny tsirairay rehefa voasariky ny fanirian’ny tenany ihany, ka voafandrik’izany. Ary ny faniriana rehefa kolokoloina, dia miteraka fahotana, ary ny fahotana kosa rehefa tanterahina, dia miteraka fahafatesana.’ (Jak. 1:14, 15) Ao amin’ny fo no misy ny faniriana, ka ny fontsika no kendren’i Satana mba hahatonga antsika hivadika amin’Andriamanitra.
5, 6. a) Inona no ampiasain’i Satana mba hahazoana ny fontsika? b) Inona avy ny fomba ampiasain’i Satana mba hahatonga ny fontsika haniry zava-dratsy, ary nahoana izy no efa tena za-draharaha?
5 Inona no ampiasain’i Satana mba hahazoana ny fontsika? Milaza ny Baiboly fa ‘eo ambany fahefan’ilay ratsy izao tontolo izao manontolo.’ (1 Jaona 5:19) Anisan’ny fitaovana ampiasain’i Satana “ny zavatra eo amin’izao tontolo izao.” (Vakio ny 1 Jaona 2:15, 16.) Efa namolavola tsara an’ity tontolo ity izy, nandritra ny an’arivony taona maro. Miaina eo anivon’io tontolo io isika, ka mila mitandrina amin’ny tetika ampiasain’i Satana.—Jaona 17:15.
6 Ataon’i Satana izay hahatonga ny fontsika haniry zava-dratsy. Mampiasa fomba telo izy, araka ny tenin’ny apostoly Jaona: 1) “Ny fanirian’ny nofo”, 2) “ny fanirian’ny maso”, ary 3) “ny fampideraderana fananana.” Nampiasa an’ireo i Satana rehefa naka fanahy an’i Jesosy tany an-tany efitra. Efa an-taonany maro izy no nampiasa an’ireo fandrika ireo, ka efa tena hainy ny mampiasa azy ireo arakaraka izay hitany fa hahasarika ny tsirairay. Ilaintsika àry ny mandinika ny fomba hiarovantsika tena. Hodinihintsika anefa aloha hoe nahoana no nandaitra tamin’i Eva ny fakam-panahy nataon’ny Devoly, nefa tsy nandaitra tamin’ny Zanak’Andriamanitra.
“NY FANIRIAN’NY NOFO”
“Ny fanirian’ny nofo” no nahavoa an’i Eva (Fehintsoratra 7)
7. Ahoana no nampiasan’i Satana “ny fanirian’ny nofo” mba hakana fanahy an’i Eva?
7 Tena mila sakafo ny vatana mba ho velona foana. Noforonin’Andriamanitra mba hamokatra sakafo be dia be ny tany. Mety hampiasa ny faniriantsika hisakafo anefa i Satana, mba hitaomana antsika tsy hanao ny sitrapon’Andriamanitra. Diniho izay nataony tamin’i Eva. (Vakio ny Genesisy 3:1-6.) Nilaza tamin’i Eva i Satana fa afaka mihinana ny voan’ny “hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy” izy, nefa tsy ho faty. Hitovy amin’Andriamanitra, hono, i Eva, amin’ny andro hihinanany azy io. (Gen. 2:9) Te hilaza ny Devoly fa tsy nila nankatò an’Andriamanitra i Eva mba hahavelomany. Lainga tsotra izao izany! Nisy zavatra roa azon’i Eva natao, rehefa nampidirin’i Satana tao an-tsainy ilay hevitra: Na nesoriny tao an-tsainy izany, na noeritreretiny foana ka vao mainka izy te hihinana an’ilay voankazo. Nahazo nihinana tamin’ny hazo hafa rehetra izy, nefa naleony nifantoka tamin’ny tenin’i Satana momba an’ilay hazo teo afovoan’ny zaridaina. Nakany àry ny voany ka nohaniny. Voataonan’i Satana haniry zavatra noraran’ny Mpamorona i Eva tamin’izay.
Nitadidy izay tena zava-dehibe foana i Jesosy (Fehintsoratra 8)
8. Ahoana no nampiasan’i Satana “ny fanirian’ny nofo” mba hakana fanahy an’i Jesosy, ary nahoana no tsy nahomby izany?
8 Mitovy amin’izany ihany ny tetika nampiasain’i Satana, rehefa naka fanahy an’i Jesosy izy. Tsy nihinan-kanina 40 andro sy 40 alina i Jesosy, ka ny faniriany hisakafo no nampiasain’i Satana hakana fanahy azy. Hoy i Satana: “Raha zanak’Andriamanitra ianao, dia teneno ho tonga mofo io vato io.” (Lioka 4:1-3) Nisy zavatra roa azon’i Jesosy natao: Na izy nampiasa ny fahaizany manao fahagagana mba hahazoana sakafo, na izy tsy nanao izany. Fantatr’i Jesosy fa tsy tokony hampiasa izany fahaizany izany izy mba ho tombontsoany manokana. Marina fa noana izy, nefa ny hiaro ny fifandraisany tamin’i Jehovah no zava-dehibe taminy, fa tsy izay hahavoky azy. Namaly àry izy hoe: “Voasoratra hoe: ‘Tsy ny mofo ihany no tsy maintsy iveloman’ny olona, fa ny teny rehetra avy amin’ny vavan’i Jehovah koa.’ ”—Mat. 4:4.
“NY FANIRIAN’NY MASO”
9. Inona no dikan’ny hoe “fanirian’ny maso”, ary ahoana no nampiasan’i Satana an’io faniriana io mba hakana fanahy an’i Eva?
9 Nilaza i Jaona fa fomba hakan’i Satana fanahy antsika koa “ny fanirian’ny maso”, izany hoe mety hanomboka haniry zavatra iray isika raha vao mijery an’ilay izy fotsiny. Nampiasa an’io faniriana io i Satana, rehefa nilaza tamin’i Eva hoe: “Hahiratra ny masonareo.” Arakaraka ny nijeren’i Eva an’ilay voankazo, no vao mainka nahatonga azy haniry hihinana an’ilay izy. Hitan’i Eva fa ‘nahafinaritra ny maso’ ilay hazo.
10. Ahoana no nampiasan’i Satana “ny fanirian’ny maso” mba hakana fanahy an’i Jesosy, ary ahoana no navalin’i Jesosy?
10 Ahoana kosa no nataon’ny Devoly tamin’i Jesosy? ‘Nasehony azy indray mipy maso ny fanjakana rehetra manerana ny tany onenana. Ary hoy izy: “Homeko anao izao fahefana rehetra izao sy ny voninahiny.” ’ (Lioka 4:5, 6) Mazava ho azy fa tsy afaka ny hahita indray mipy maso ny fanjakana rehetra i Jesosy, raha tamin’ny masony ara-bakiteny. Nasehon’i Satana azy tamin’ny alalan’ny fahitana kosa ny voninahitr’ireny fanjakana ireny. Nihevitra i Satana fa hahasarika an’i Jesosy izany. Tsy menatra akory izy niteny hoe: “Raha miankohoka indray mandeha eto anatrehako ianao, dia ho anao manontolo izany.” (Lioka 4:7) Tsy nanaiky hanao ny sitrapon’i Satana mihitsy i Jesosy, ka namaly avy hatrany hoe: “Voasoratra hoe: ‘I Jehovah Andriamanitrao no tsy maintsy iankohofanao, ary ho azy irery ihany no tsy maintsy anaovanao fanompoana masina.’ ”—Lioka 4:8.
“NY FAMPIDERADERANA FANANANA”
11. Ahoana no nakan’i Satana fanahy an’i Eva?
11 Nilaza i Jaona fa anisan’ny zavatra eo amin’izao tontolo izao “ny fampideraderana fananana.” Mazava ho azy fa tsy afaka ‘nampideradera fananana’ i Adama sy Eva, tamin’ny mbola tsy nisy olon-kafa ankoatra azy mivady teto an-tany. Nihevi-tena ho ambony anefa izy ireo. Te hilaza i Satana, tamin’izy naka fanahy an’i Eva, fa nisy zavatra faran’izay tsara tsy nomen’Andriamanitra an’i Eva. Nilaza izy fa amin’ny andro hihinanan’i Eva amin’ilay “hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy”, dia ‘ho tahaka an’Andriamanitra izy, ka hahalala ny tsara sy ny ratsy.’ (Gen. 2:17; 3:5) Te hilaza àry i Satana fa tsy voatery hila an’Andriamanitra i Eva. Nihevi-tena ho ambony i Eva, matoa nino an’ilay lainga. Nihinana tamin’ilay voankazo voarara izy, satria nino fa tsy ho faty. Diso hevitra tanteraka izy!
12. Inona no nataon’i Satana mba hakana fanahy an’i Jesosy, ary ahoana no nataon’i Jesosy?
12 Tsy nitovy tamin’i Eva i Jesosy, fa tena nanetry tena ka modely ho antsika. Nampiasa fomba hafa i Satana mba hakana fanahy azy. Nasain’i Satana nanao zavatra mampitolagaga, ohatra, izy, mba hitsapana toetra an’Andriamanitra. Tsy nanaiky hanao izany mihitsy anefa izy, satria nihevi-tena ho ambony izy raha nanao izany. Mazava sy mivantana kosa ny teny navaliny an’i Satana. Hoy izy: “Voalaza hoe: ‘Aza mitsapa toetra an’i Jehovah Andriamanitrao.’ ”—Vakio ny Lioka 4:9-12.
AHOANA NO HIAROVANTSIKA NY FIFANDRAISANTSIKA AMIN’I JEHOVAH?
13, 14. Ahoana no akan’i Satana fanahy ny olona ankehitriny?
13 Mitovy amin’ny nataon’i Satana tamin’i Eva sy Jesosy no ataony amintsika ankehitriny. Mampiasa “ny fanirian’ny nofo” izy, mba hitaomana ny olona haloto fitondran-tena, na hahatonga azy hihinana sy hisotro tafahoatra. Mampiasa “ny fanirian’ny maso” koa izy mba hitaomana ny olona hijery sary vetaveta, indrindra fa ao amin’ny Internet. Tena fakam-panahy ho an’ny olona manambony tena sy ireo maniry ‘hampideradera fananana’ koa ny faniriana hanan-karena sy halaza ary hanam-pahefana.
Inona no toro lalan’ny Baiboly tonga ao an-tsainao amin’ireo toe-javatra ireo? (Fehintsoratra 13, 14)
14 Ataon’i Satana toy ny jono “ny zavatra eo amin’izao tontolo izao.” Manintona izy ireny nefa mamandrika antsika. Ampiasain’i Satana ny zavatra heverin’ny olona fa ilaina eo amin’ny fiainana andavanandro, mba hisarihana azy ireo handika ny lalàn’Andriamanitra. Ataony misy vokany eo amin’ny faniriantsika ireny zavatra ireny, ka mety hahatonga ny fontsika ho ratsy. Ataon’i Satana izay hiheverantsika fa zava-dehibe noho ny manao ny sitrapon’Andriamanitra ny mitady izay ilaintsika eo amin’ny fiainana sy izay hampiadana antsika. Hanaiky ho voatariny ve isika?
15. Inona no azontsika atao mba hanoherana fakam-panahy, toy ny nataon’i Jesosy?
15 Resin’ny fakam-panahy i Eva, fa tsy toy izany kosa i Jesosy. Nampiasa ny Soratra Masina foana izy, isaky ny namaly an’i Satana, ka nilaza hoe: “Voasoratra hoe” na “Voalaza hoe.” Hahalala tsara ny Soratra Masina isika raha mazoto mianatra azy io, ka hahatsiaro andinin-teny izay hanampy antsika hisaina tsara rehefa misy fakam-panahy. (Sal. 1:1, 2) Ilaina koa ny mitadidy ny ohatra navelan’ireo olona tsy mivadika resahin’ny Baiboly. Ho afaka hanahaka azy ireny isika amin’izay. (Rom. 15:4) Ho voaro isika raha manaja lalina an’i Jehovah, ka tia izay tiany ary mankahala izay halany.—Sal. 97:10.
16, 17. Ahoana no tokony ‘hampiasantsika ny saintsika’, ary inona no vokatr’izany eo amintsika?
16 Mampirisika antsika ‘hampiasa ny saintsika’ ny apostoly Paoly, mba hahatonga ny fisainantsika hifanaraka amin’ny fisainan’Andriamanitra, fa tsy amin’ny an’ity tontolo ity. (Rom. 12:1, 2) Nohamafisin’i Paoly hoe ilaintsika ny mifehy mafy ny eritreritsika, ka hoy izy: “Mandrava fisainana mbamin’ny zavatra avo rehetra atsangana hanohitra ny fahalalana an’Andriamanitra izahay, ary baboinay hankatò an’i Kristy ny hevitra rehetra.” (2 Kor. 10:5) Misy vokany lehibe eo amin’ny maha isika antsika ny zavatra eritreretintsika, ka zavatra mampifaly an’Andriamanitra foana no tokony ‘hoheverintsika.’—Fil. 4:8.
17 Tsy ho masina isika, raha eritreri-dratsy sy fanirian-dratsy no ampidirintsika ao an-tsaintsika. Tokony ho tia an’i Jehovah “amin’ny fo madio” isika. (1 Tim. 1:5) Mamitaka anefa ny fo, ka mety tsy ho tsapantsika akory fa efa misy vokany lehibe eo amintsika “ny zavatra eo amin’izao tontolo izao.” (Jer. 17:9) Mila ‘mandini-tena foana’ àry isika ‘mba hahitana raha ao amin’ny finoana isika na tsia.’ Tokony hojerentsika foana raha mifanaraka amin’izay ianarantsika ao amin’ny Baiboly ny fisainantsika sy ny faniriantsika.—2 Kor. 13:5.
18, 19. Nahoana isika no tokony hiezaka mafy mba hahazo sitraka amin’i Jehovah?
18 Manampy antsika tsy ho voasariky “ny zavatra eo amin’izao tontolo izao” koa ny fitadidiana ny tenin’i Jaona hoe: “Mandalo izao tontolo izao sy ny faniriany, fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.” (1 Jaona 2:17) Toy ny hoe mandeha tsara sy haharitra ny tontolon’i Satana, nefa mbola ho rava izy io. Hanampy antsika tsy ho voafitak’i Satana àry ny mitadidy hoe tsy hisy haharitra ny zavatra atolotr’ity tontolo ity.
19 Mampirisika antsika ny apostoly Petera mba hiezaka hahazo sitraka amin’Andriamanitra, “raha mbola miandry sy manao an-tsaina foana ny fanatrehan’ny andron’i Jehovah” isika. “Io andro io no handevonana ny lanitra efa mirehitra sy hampiempoana ireo singan-javatra efa mahamay be.” (2 Pet. 3:12) Tsy ho ela dia ho tonga io andro io, ary hopotehin’i Jehovah tanteraka ny tontolon’i Satana. Mandra-pahatongan’izany, dia mbola hampiasa “ny zavatra eo amin’izao tontolo izao” foana i Satana mba hakana fanahy antsika, toy ny nataony tamin’i Eva sy Jesosy. Tsy tokony hanome fahafaham-po ny fanirian-dratsy isika, toa an’i Eva. Toy ny hoe manaiky an’i Satana ho andriamanitsika isika, raha manao izany. Tokony hanahaka an’i Jesosy kosa isika ka hanohitra an’ireny fakam-panahy ireny, na dia hoatran’ny hoe manintona be aza izy ireny. Enga anie ny tsirairay avy amintsika ka hiezaka mafy hahazo sitraka amin’i Jehovah.
Hizara Hizara Eritrereto hoe Olona Tokony Hanao Ahoana Ianao
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Aogositra 2013
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Aogositra 2013